YUPT Public Co.,Ltd ရှိ ယာဥ်များ၏ ယာဥ်ကြံခိုင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း | Myanmar Tender Portal
YUPT Public Co.,Ltd ရှိ ယာဥ်များ၏ ယာဥ်ကြံခိုင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Tender ID: 11182
တင်ဒါကာလ: September 16, 2020 - September 30, 2020
ကုမ္ပဏီ အမည်: ရန်ကုန်မြို့ပြအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် (YUPT Public Co.,Ltd.)
၁။ ရန်ကုန်မြို့ပြအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်ပိုင် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် သက်တမ်းပြည့်ပြေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် အောက်ပါယာဉ်ကြံ့ခိုင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်-
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းများကို ၁၆-၉-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ (၀၉:၃၀ နာရီ မှ ၁၆:၃၀ နာရီ) ရုံးချိန်အတွင်း ၅၀၀၀/- ကျပ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ပြအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် (YUPT Public Co.,Ltd.) အမှတ် (၂၉၆)၊ သံသုမာလမ်း၊(၁၅) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ကုမ္ပဏီများသည် တင်ဒါအဆိုပြုလွှာအပြည့်အစုံကို ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရက်၊ ၁၂:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ ပြန်လည်တင်သွင်းရပါမည်။ နောက်ကျတင်သွင်းသော တင်ဒါများကို လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အသေးစိတ်သိရှိလိုသောအချက်များရှိပါက ဖုန်း-၀၉-၄၂၅၀၂၂၀၃၁၊ ၀၉-၅၀၆၅၃၇၉ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်၊၊